မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ပြည်နယ်ကော်မတီလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
တောင်ကြီး သြဂုတ် − ၂၈
တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျစီမံလျက် အဆင့်အလိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ မသန်စွမ်းသူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် မသန်စွမ်းသူအခွင့်အရေးများ တိုးတက်ခံစားရရှိရေးအတွက် အစဉ်တစ်စိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရှမ်းပြည်နယ် မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြည်နယ်ကော်မတီလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို သြဂုတ်(၂၈)ရက် မွန်းလွဲ(၂)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ပြည်နယ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များတွင် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကော်မတီများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်များက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူလျက် ၂၀၁၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်(၁၉)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် မသန်စွမ်းသူများ အသင်းများအားဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ၂၀၁၉ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၉)ရက် နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ် မသန်စွမ်းသူများအသင်းအား မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ကာ အဖွဲ့ဝင်(၁၈)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီမှတစ်ဆင့် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မသန်စွမ်းသူများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစသည့် အခွင့်အရေးများကို ပြည့်မီလာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင် များဆိုင်ရာ ၂၀၃၀အစီအစဉ်၏ ကတိပြုထားရှိသည့် မည်သူမှနောက်ကျ မကျန်ရစ်စေရေးမူနှင့်အညီ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မသန်စွမ်းသူများ၊ လူနည်းစုမသန်စွမ်းသူများအတွက်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မသန်စွမ်းသူများ ၏ဘဝအရည်အသွေးပိုမိုဖွံ့ဖြိုးရန်၊ တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရရှိရန်၊ အပြည့်အဝပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိရန်၊ မသန်စွမ်းသူများ၏ နှစ်စဉ်ဘဝတွင်လည်းကောင်း၊ ရပ်ရွာအတွင်းတွင်လည်းကောင်း၊ လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ကို လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်ရန်၊ ၎င်းတို့ ရင်ဆိုင်နေရသော အတားအဆီးနှင့် အခက်အခဲများကို ဖယ်ရှားပေးရန်၊ လုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံတော်အဆင့် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုများကို ဝိုင်းဝန်းအထောက်အကူပြုပေးကြရန် ပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြည်နယ်ကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်မှ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး၊ တက်ရောက်လာသူများမှ မိတ်ဆက်၍ အထွေထွေဆွေးနွေးကြကာ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ပြည်နယ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ နိဂုံးချုပ်စကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မသနျစှမျးသူမြား၏ အခှငျ့အရေးမြားဆိုငျရာ ပွညျနယျကျောမတီလုပျငနျး ညှိနှိုငျးအစညျးအဝေးကငျြးပ
တောငျကွီး သွဂုတျ − ၂၈
တိုငျးပွညျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ လူမှုကာကှယျစောငျ့ရှောကျရေးလုပျငနျးမြားကို စနဈတကစြီမံလကျြ အဆငျ့အလိုကျ ဆောငျရှကျလကျြရှိရာ မသနျစှမျးသူမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ မသနျစှမျးသူအခှငျ့အရေးမြား တိုးတကျခံစားရရှိရေးအတှကျ အစဉျတဈစိုကျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျလကျြရှိရာ ရှမျးပွညျနယျ မသနျစှမျးသူမြား အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ ပွညျနယျကျောမတီလုပျငနျး ညှိနှိုငျးအစညျးအဝေးကို သွဂုတျ(၂၈)ရကျ မှနျးလှဲ(၂)နာရီက တောငျကွီးမွို့ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရရုံး အစညျးအဝေးခနျးမ၌ ကငျြးပသညျ။
မသနျစှမျးသူမြား၏ အခှငျ့အရေးမြားဆိုငျရာ ပွညျနယျကျောမတီဥက်ကဋ်ဌ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာလငျးထှဋျက တိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ပွညျနယျမြားတှငျ မသနျစှမျးသူမြား၏ အခှငျ့အရေးမြားဆိုငျရာ ကျောမတီမြားကို သကျဆိုငျရာ တိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ဝနျကွီးခြုပျမြားက ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈတာဝနျယူလကျြ ၂၀၁၈ခုနှဈ စကျတငျဘာလ တှငျဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီဖွဈကွောငျး၊ ရှမျးပွညျနယျ မသနျစှမျးသူမြား အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ ကျောမတီအဖှဲ့ဝငျ(၁၉)ဦးဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီး ဖွဈပါကွောငျး၊ တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျအလိုကျ မသနျစှမျးသူမြား အသငျးမြားအားဖှဲ့စညျးခဲ့ရာ ၂၀၁၉ခုနှဈ သွဂုတျလ(၉)ရကျ နတှေ့ငျ ရှမျးပွညျနယျ မသနျစှမျးသူမြားအသငျးအား မဲစနဈဖွငျ့ရှေးခယျြကာ အဖှဲ့ဝငျ(၁၈)ဦးဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီးဖွဈကွောငျး၊ ကျောမတီမှတဈဆငျ့ လူတိုငျးအကြုံးဝငျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု မသနျစှမျးသူမြား၏ ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ အလုပျအကိုငျ၊ နိုငျငံရေး၊ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေးစသညျ့ အခှငျ့အရေးမြားကို ပွညျ့မီလာစရေနျ ဆောငျရှကျပေးနိုငျမှာဖွဈပွီး၊ စဉျဆကျမပွတျ ဖှံ့ဖွိုးမှုပနျးတိုငျ မြားဆိုငျရာ ၂၀၃၀အစီအစဉျ၏ ကတိပွုထားရှိသညျ့ မညျသူမှနောကျကြ မကနျြရဈစရေေးမူနှငျ့အညီ တိုငျးရငျးသားလူမြိုး မသနျစှမျးသူမြား၊ လူနညျးစုမသနျစှမျးသူမြားအတှကျပါ ထညျ့သှငျးစဉျးစား ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ မသနျစှမျးသူမြား ၏ဘဝအရညျအသှေးပိုမိုဖှံ့ဖွိုးရနျ၊ တနျးတူညီမြှအခှငျ့အရေးရရှိရနျ၊ အပွညျ့အဝပါဝငျဆောငျရှကျခှငျ့ရရှိရနျ၊ မသနျစှမျးသူမြား၏ နှဈစဉျဘဝတှငျလညျးကောငျး၊ ရပျရှာအတှငျးတှငျလညျးကောငျး၊ လူမှုရေးဝနျဆောငျမှုတို့ကို လကျလှမျးမီရရှိနိုငျရနျ၊ ၎င်းငျးတို့ ရငျဆိုငျနရေသော အတားအဆီးနှငျ့ အခကျအခဲမြားကို ဖယျရှားပေးရနျ၊ လုပျဆောငျနသေော နိုငျငံတျောအဆငျ့ ကွိုးပမျး ဆောငျရှကျမှုမြားကို ဝိုငျးဝနျးအထောကျအကူပွုပေးကွရနျ ပွောကွားသှားသညျ။
ဆကျလကျ၍ မသနျစှမျးသူမြား အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ ပွညျနယျကျောမတီဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဗမာတိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာ ဝနျကွီးဒေါကျတာအောငျသနျးမောငျမှ မသနျစှမျးသူမြား၏ အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ လုပျငနျးမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ ရှငျးလငျးတငျပွပွီး၊ တကျရောကျလာသူမြားမှ မိတျဆကျ၍ အထှထှေဆှေေးနှေးကွကာ မသနျစှမျးသူမြား၏ အခှငျ့အရေးမြားဆိုငျရာ ပွညျနယျ ကျောမတီဥက်ကဋ်ဌ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာလငျးထှဋျမှ နိဂုံးခြုပျစကား ပွောကွားခဲ့ကွောငျး သိရှိရသညျ။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နော်ဝေသံရုံးမှ Mrs. Lise Nordgaad တွေ့ဆုံ
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်၊ အစိုးရ အဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထင်ကျော်အေးနှင့်အတူ သြဂုတ် (၂၈)ရက် နံနက်(၁၁)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Callခန်းမ၌ နော်ဝေသံရုံးမှ Charge d’ Affaires a.i. ဖြစ်သူ Mrs. Lise Nordgaad ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ UNDPနှင့် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းဖြစ်သည့် အင်းလေးကန် စီမံခန့်ခွဲမှုအာဏာပိုင် အင်အား တောင့်တင်းစေရေးနှင့် ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် UNEP နှင့် HELVETAS တို့မကြာသေးမီက လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည့် Climate Smart Rice Project ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လာရောက်တွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် Mrs. Lise Nordgaad မှ ယခုလိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အချိန်ပေးပြီးတွေ့ဆုံရသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ အင်းလေးကန်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားလိုကြောင်းနှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်ကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်း လိုကြောင်း၊ လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်တွင် အင်းလေးကန်ထိန်းသိမ်းရေးကို မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိရှိလိုကြောင်းနှင့် UNDP အနေဖြင့် နည်းပညာ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် တင်ပြထားကြောင်း၊ အင်းလေးကန်တွင် တရားဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် အောင်မြင်မှုရရှိရန် ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း၊ UNDP အဖွဲ့မှဆွေးနွေးရာ ဥပဒေမူကြမ်းကို ပြုစုနေ ကြောင်းနှင့် ယခုလက်ရှိ ဥပဒေကျမ်းတွင် ပါဝင်မှုမရှိသေးကြောင်းနှင့် အင်းလေးကန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အင်းလေးကန်အတွက် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် (၂)နှစ်စီမံကိန်းဖြစ်သည့်အတွက် ယခုလက်ရှိ တွင်သက်တမ်းပြည့်သွားပြီ ဖြစ်သောကြောင့် အင်းလေးကန်အတွက် နောက်ဆံတင်းမိပါကြောင်း ဆွေးနွေးသွားသည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ယခုလို တွေ့ဆုံရသည့်အတွက် ကြိုဆိုပါကြောင်းနှင့် အင်းလေးကန်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းပြလိုသည်မှာ အင်းလေးကန်တွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ပါဝင် နေထိုင်နေကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် အင်းလေးကန်အုပ်ချုပ်မှုကောင်းပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် အင်းလေးကန် နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှင်းပြလိုသည်မှာ အင်းလေးကန်တွင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူပေါင်းစုံရှိပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရ သည်မှာ အဆင်ပြေမှုသိပ်မရှိကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား သဘောထားဆန္ဒများ ကွဲပြားနေကြောင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်၍ မရကြောင်း၊ အင်းလေးကန်ကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း စောင့်ရှောက်နေပါကြောင်း၊ နော်ဝေနိုင်ငံအနေဖြင့် အင်းလေးကန်နှင့်ပတ်သက်၍ ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးနေသည်ကို သိရှိရပါကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသွားသည်။
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့နှငျ့ နျောဝသေံရုံးမှ Mrs. Lise Nordgaad တှဆေုံ့
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာလငျးထှဋျ၊ ပွညျနယျသယံဇာတနှငျ့သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာညီညီအောငျ၊ ဗမာတိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာဝနျကွီး ဒေါကျတာအောငျသနျးမောငျ၊ အစိုးရ အဖှဲ့ညှနျကွားရေးမှူး ဦးထငျကြျောအေးနှငျ့အတူ သွဂုတျ (၂၈)ရကျ နံနကျ(၁၁)နာရီက တောငျကွီးမွို့ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရရုံး ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ Callခနျးမ၌ နျောဝသေံရုံးမှ Charge d’ Affaires a.i. ဖွဈသူ Mrs. Lise Nordgaad ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့မှ UNDPနှငျ့ လကျရှိဆောငျရှကျနသေော စီမံကိနျးဖွဈသညျ့ အငျးလေးကနျ စီမံခနျ့ခှဲမှုအာဏာပိုငျ အငျအား တောငျ့တငျးစရေေးနှငျ့ ကုလသမဂ်ဂပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးအစီအစဉျ UNEP နှငျ့ HELVETAS တို့မကွာသေးမီက လကျမှတျ ရေးထိုးခဲ့သညျ့ Climate Smart Rice Project ကိစ်စရပျမြားနှငျ့စပျလဉျြး၍ လာရောကျတှဆေုံ့ကွောငျးသိရသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ Mrs. Lise Nordgaad မှ ယခုလိုရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့နှငျ့ အခြိနျပေးပွီးတှဆေုံ့ရသညျ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါကွောငျး၊ အငျးလေးကနျကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး ပွောကွားလိုကွောငျးနှငျ့ ခရီးသှားဧညျ့သညျကိစ်စရပျမြား ရှငျးလငျး လိုကွောငျး၊ လကျရှိရှမျးပွညျနယျတှငျ အငျးလေးကနျထိနျးသိမျးရေးကို မညျကဲ့သို့ ဆောငျရှကျနသေညျကို သိရှိလိုကွောငျးနှငျ့ UNDP အနဖွေငျ့ နညျးပညာ ကူညီထောကျပံ့ပေးနိုငျရနျ တငျပွထားကွောငျး၊ အငျးလေးကနျတှငျ တရားဝငျလုပျကိုငျနိုငျရနျ အတှကျပါဝငျဖှဲ့စညျးပုံမြားနှငျ့ အောငျမွငျမှုရရှိရနျ ဆောငျရှကျလိုကွောငျး၊ UNDP အဖှဲ့မှဆှေးနှေးရာ ဥပဒမေူကွမျးကို ပွုစုနေ ကွောငျးနှငျ့ ယခုလကျရှိ ဥပဒကေမျြးတှငျ ပါဝငျမှုမရှိသေးကွောငျးနှငျ့ အငျးလေးကနျအတှကျ ဖှဲ့စညျးပုံရှိရနျလိုအပျကွောငျး၊ စီမံကိနျး၏ရညျရှယျခကျြမှာ အငျးလေးကနျအတှကျ လုပျငနျးမြားလုပျကိုငျနိုငျရနျ (၂)နှဈစီမံကိနျးဖွဈသညျ့အတှကျ ယခုလကျရှိ တှငျသကျတမျးပွညျ့သှားပွီ ဖွဈသောကွောငျ့ အငျးလေးကနျအတှကျ နောကျဆံတငျးမိပါကွောငျး ဆှေးနှေးသှားသညျ။
ဆကျလကျ၍ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာလငျးထှဋျက ယခုလို တှဆေုံ့ရသညျ့အတှကျ ကွိုဆိုပါကွောငျးနှငျ့ အငျးလေးကနျနှငျ့ပတျသကျ၍ ရှငျးပွလိုသညျမှာ အငျးလေးကနျတှငျ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ပါဝငျ နထေိုငျနကွေောငျး၊ လကျရှိတှငျ အငျးလေးကနျအုပျခြုပျမှုကောငျးပါကွောငျး၊ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့အနဖွေငျ့ အငျးလေးကနျ နှငျ့ပတျသကျပွီး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ရှငျးပွလိုသညျမှာ အငျးလေးကနျတှငျ တိုငျးရငျးသားပွညျသူပေါငျးစုံရှိပွီး လုပျငနျးလုပျကိုငျရ သညျမှာ အဆငျပွမှေုသိပျမရှိကွောငျး၊ တိုငျးရငျးသား သဘောထားဆန်ဒမြား ကှဲပွားနကွေောငျး၊ အစိုးရအဖှဲ့အနဖွေငျ့ ဝငျရောကျစှတျဖကျ၍ မရကွောငျး၊ အငျးလေးကနျကို ထိနျးထိနျးသိမျးသိမျး စောငျ့ရှောကျနပေါကွောငျး၊ နျောဝနေိုငျငံအနဖွေငျ့ အငျးလေးကနျနှငျ့ပတျသကျ၍ ဝငျရောကျဖွရှေငျးပေးနသေညျကို သိရှိရပါကွောငျး ဆှေးနှေးပွောကွားသှားသညျ။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ရန်ကုန်မြို့ ဆွစ်ဇာလန်သံရုံး၏ပထမအတွင်းဝန်နှင့် Skills And Market Development ဖြစ်သူ Mrs. Renate Lefroy အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံ
တောင်ကြီး သြဂုတ် − ၂၁
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇော်နှင့် အတူ သြဂုတ်(၂၁)ရက် ညနေ(၃)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်Callခန်းမ၌ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်စီမံချက်အတွက် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ၊ အထောက်အပံများ ပံ့ပိုးပေးအပ်နိုင်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍတွင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်မြို့ ဆွစ်ဇာလန်သံရုံး၏ပထမအတွင်းဝန်နှင့် Skills And Market Development ဖြစ်သူ Mrs. Renate Lefroy အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ရန်ကုန်မြို့ ဆွစ်ဇာလန်သံရုံး၏ပထမအတွင်းဝန်နှင့် Skills And Market Development ဖြစ်သူ Mrs. Renate Lefroy အဖွဲ့မှ မိမိတို့အဖွဲ့သည် ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် မွန်၊ ကရင်၊ တနင်္သာရီတို့တွင် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီး၊ ယခု ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)တွင်ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း၊ နောက်ထပ်(၁၀)နှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၌ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လိုကြောင်း၊ ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းကို ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်နိုင်မည့်အဖွဲ့များဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသတွင် သင်တန်းလိုအပ်ချက်များနှင့် သင်တန်းပို့ချပေးပါက လူငယ်များနည်းပညာရရွှိပီး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်လိုကြောင်း ဆွေးနွေးသွားသည်။
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့နှငျ့ ရနျကုနျမွို့ ဆှဈဇာလနျသံရုံး၏ပထမအတှငျးဝနျနှငျ့ Skills And Market Development ဖွဈသူ Mrs. Renate Lefroy အဖှဲ့နှငျ့တှဆေုံ့
တောငျကွီး သွဂုတျ − ၂၁
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာလငျးထှဋျ၊ ပွညျနယျစီမံကိနျးနှငျ့ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး ဦးစိုးညှနျ့လှငျ၊ ဗမာတိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာဝနျကွီး ဒေါကျတာအောငျသနျးမောငျ၊ အစိုးရအဖှဲ့အတှငျးရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇျောနှငျ့ အတူ သွဂုတျ(၂၁)ရကျ ညနေ(၃)နာရီက တောငျကွီးမွို့ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ရုံး ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျCallခနျးမ၌ ရှမျးပွညျနယျ(တောငျပိုငျး)တှငျ ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့စီမံခကျြအတှကျ လိုအပျသညျ့အခကျြအလကျမြား၊ အထောကျအပံမြား ပံ့ပိုးပေးအပျနိုငျရေးနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏နညျးပညာ၊ သကျမှေးပညာနှငျ့ လကေ့ငျြ့ရေးကဏ်ဍတှငျ ခြိတျဆကျဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့စပျလဉျြး၍ ရနျကုနျမွို့ ဆှဈဇာလနျသံရုံး၏ပထမအတှငျးဝနျနှငျ့ Skills And Market Development ဖွဈသူ Mrs. Renate Lefroy အဖှဲ့နှငျ့ တှဆေုံ့ရခွငျးဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ရနျကုနျမွို့ ဆှဈဇာလနျသံရုံး၏ပထမအတှငျးဝနျနှငျ့ Skills And Market Development ဖွဈသူ Mrs. Renate Lefroy အဖှဲ့မှ မိမိတို့အဖှဲ့သညျ ၂၀၁၉ခုနှဈတှငျ မှနျ၊ ကရငျ၊ တနင်ျသာရီတို့တှငျ လုပျငနျးမြားဆောငျရှကျပွီး၊ ယခု ရှမျးပွညျနယျ(တောငျပိုငျး)တှငျဆောငျရှကျလိုကွောငျး၊ နောကျထပျ(၁၀)နှဈတှငျ ရှမျးပွညျနယျ(တောငျပိုငျး)၌ လုပျငနျးမြား လုပျကိုငျလိုကွောငျး၊ ဈေးကှကျခြိတျဆကျမှုအပိုငျးကို ပူးပေါငျးခြိတျဆကျနိုငျမညျ့အဖှဲ့မြားဖွငျ့ ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ ဒသေတှငျ သငျတနျးလိုအပျခကျြမြားနှငျ့ သငျတနျးပို့ခပြေးပါက လူငယျမြားနညျးပညာရရွှိပီး သငျတနျးမြား ဖှငျ့လှဈလိုကွောငျး ဆှေးနှေးသှားသညျ။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဂျာမဏီသံရုံးမှ သံမှူးဖြစ်သူ Mrs. Marianna Knirsch အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံ
တောင်ကြီး သြဂုတ် − ၂၇
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇော်၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာတစ်ဦးနှင့်အတူ သြဂုတ် (၂၇)ရက် မွန်းလွဲ(၂)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Callခန်းမ၌ ဂျာမဏီသံရုံးမှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအကြီးအကဲနှင့် သံမှူးဖြစ်သူ Mrs. Marianna Knirsch ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် GIZ အဖွဲ့မှ ကူညီထောက်ပံ့ လျက်ရှိသည့် ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ် ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လာရောက် တွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် Mrs. Marianna Knirsch မှ ယခုလိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံရသည့်အတွက် ဝမ်းသာပါကြောင်း၊ ဂျာမဏီနိုင်ငံသည် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် လုပ်ငန်းများတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လိုကြောင်းနှင့် မိမိသည်ရှမ်းပြည်နယ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဂျာမန်ကော်ပိုရေးရှင်းအနေဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့၏အမြင်နှင့် အခြေခံသဘောထားများ ရယူလိုကြောင်း ဆွေးနွေးသွားသည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ယခုလိုတွေ့ဆုံရသည့်အတွက် ကြိုဆိုပါကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းများအောင်မြင်မှုရှိသည့်အတွက် ဝမ်းသာပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အား ကူညီဆောင်ရွက်ပေး သည့်အတွက် GIZ ကိုအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသွားသည်။
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့နှငျ့ ဂြာမဏီသံရုံးမှ သံမှူးဖွဈသူ Mrs. Marianna Knirsch အဖှဲ့နှငျ့တှဆေုံ့
တောငျကွီး သွဂုတျ − ၂၇
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာလငျးထှဋျ၊ ပွညျနယျစီမံကိနျးနှငျ့ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး ဦးစိုးညှနျ့လှငျ၊ ပွညျနယျစိုကျပြိုးရေး မှေးမွူရေးနှငျ့ ဆညျမွောငျးဝနျကွီး ဦးစိုငျးလုံကြျော၊ ပွညျနယျလူမှုရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာမြိုးထှနျး၊ အစိုးရအဖှဲ့အတှငျးရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇျော၊ သကျဆိုငျရာပွညျနယျအဆငျ့ ဌာနဆိုငျရာတဈဦးနှငျ့အတူ သွဂုတျ (၂၇)ရကျ မှနျးလှဲ(၂)နာရီက တောငျကွီးမွို့ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရရုံး ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ Callခနျးမ၌ ဂြာမဏီသံရုံးမှ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေးအကွီးအကဲနှငျ့ သံမှူးဖွဈသူ Mrs. Marianna Knirsch ဦးဆောငျသောအဖှဲ့သညျ GIZ အဖှဲ့မှ ကူညီထောကျပံ့ လကျြရှိသညျ့ ရှမျးပွညျနယျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမွှငျ့တငျရေးအစီအစဉျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုဖိုရမျ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့စပျလဉျြး၍ လာရောကျ တှဆေုံ့ကွောငျးသိရသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ Mrs. Marianna Knirsch မှ ယခုလိုရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့နှငျ့တှဆေုံ့ရသညျ့အတှကျ ဝမျးသာပါကွောငျး၊ ဂြာမဏီနိုငျငံသညျ ရှမျးပွညျနယျတှငျ လုပျငနျးမြားတိုးခြဲ့လုပျကိုငျလိုကွောငျးနှငျ့ မိမိသညျရှမျးပွညျနယျကို ပထမဆုံးအကွိမျ ရောကျရှိလာခွငျးဖွဈပွီး၊ ဂြာမနျကျောပိုရေးရှငျးအနဖွေငျ့ အစိုးရအဖှဲ့၏အမွငျနှငျ့ အခွခေံသဘောထားမြား ရယူလိုကွောငျး ဆှေးနှေးသှားသညျ။
ဆကျလကျ၍ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျဒေါကျတာလငျးထှဋျက ယခုလိုတှဆေုံ့ရသညျ့အတှကျ ကွိုဆိုပါကွောငျးနှငျ့ လုပျငနျးမြားအောငျမွငျမှုရှိသညျ့အတှကျ ဝမျးသာပါကွောငျး၊ ရှမျးပွညျနယျအား ကူညီဆောငျရှကျပေး သညျ့အတှကျ GIZ ကိုအစိုးရအဖှဲ့အနဖွေငျ့ ကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး ဆှေးနှေးပွောကွားသှားသညျ။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် International Finance Corporation (IFC) မှ Mr. Bas Rozemuller အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံ
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးစိုးစိုးဇော်၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ သြဂုတ်(၂၁)ရက် နံနက်(၁၁)နာရီ ကတောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်Callခန်းမ၌ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ မွေးမြူရေးစက်ရုံများအပေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့် အစိုးရ၏ရည်မှန်းချက်များ၊ အခွင့်အလမ်းကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ International Finance Corporation (IFC) မှ Mr. Bas Rozemuller အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်မည့်အခမ်းအနားကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများ ကိုဖိတ်ကြားလိုကြောင်း၊ ဖွင့်ပွဲကိုအောက်တိုဘာလတွင် စီစဉ်ထားပါကြောင်းနှင့် ယခုလာရောက်တွေ့ဆုံရသည်မှာ မြန်မာပြည် တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော ဝက်ပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍ လာရောက်တွေ့ဆုံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တောင်သူလယ်သမားနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များကိုဖိတ်ကြားပြီး ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အမြတ်အစွန်းပိုမိုရရှိအောင် သန့်ရှင်းသောပုဂ္ဂလိကများကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဝက်သားများထုတ်လုပ်ခြင်းကဏ္ဍ တွင်အစားအစာများကို စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီနှင့်လယ်သမား လက်လှမ်းမီအောင် အတူတူဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါကြောင်း၊ စုစည်းဆောင်ရွက်ရန်လည်း ယုံကြည်ပါကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိမည်ကိုတွေ့ရပါ ကြောင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဌာနများက အဓိကအခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် ဝက်သားကိုအဓိကထုတ်လုပ်သည်ကိုတွေ့ရပါကြောင်း၊ ရောဂါကူးစက်မှုခံရပါက ဝက်များကို သတ်ပစ်ရန်လိုပါကြောင်း၊ ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးပါက ဝက်များကိုအသစ်ပြန်လည်မွေးမြူရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ နေရာ အသစ်ရှာဖွေရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် နေရာအသစ်တွင် ပြန်လည်မွေးမြူရန်လိုကြောင်း၊ လက်ရှိဝက်သားထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရန်လိုကြောင်း၊ စံချိန်စံညွှန်းကောင်းပါကနိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့နိုင်ကြောင်းနှင့် အစိုးရနှင့်ပြည်သူ့သဘောထား လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အစိုးရမူဝါဒနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနမှ ပိတ်ဆို့မှုမရှိရန်လိုကြောင်း၊ ဝက်များမွေးမြူပါက တစ်ခြံနှင့်တစ်ခြံနီးစပ် ရန်မလိုကြောင်း၊ မြေနေရာလိုကြောင်းနှင့်အကွာအဝေးရှိရန်လိုကြောင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် အကြံပေးဆွေးနွေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ယခုလို International Finance Corporation (IFC) မှ Mr. Bas Rozemuller အဖွဲ့မှ ပထမဆုံးအနေဖြင့်လာရောက်တွေ့ဆုံသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ ကြောင်းနှင့် ကြိုဆိုပါကြောင်းပြောကြားပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးကာ ယခုလိုဝက်မွေးမြူရေးနှင့် ရောဂါ ကျရောက်မှုကို ရှင်းပြပေးသည့်အတွက် ဗဟုသုတရရှိကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ဝေးလံသောဒေသများလည်းရှိပါကြောင်းနှင့် ထိရောက်မှုရှိအောင် ဆေးဝါးပစ္စည်းများနှင့် ကုသမှုများကို လိုအပ်ပါကြောင်း ဆွေးနွေးသွားသည်။
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့နှငျ့ International Finance Corporation (IFC) မှ Mr. Bas Rozemuller အဖှဲ့နှငျ့တှဆေုံ့
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျဒေါကျတာလငျးထှဋျ၊ ပွညျနယျစီမံကိနျးနှငျ့ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး ဦးစိုးညှနျ့လှငျ၊ ပွညျနယျစိုကျပြိုးရေးမှေးမွူရေးနှငျ့ဆညျမွောငျးဝနျကွီး ဦးစိုငျးလုံကြျော၊ အစိုးရအဖှဲ့အတှငျးရေးမှူးဦးစိုးစိုးဇျော၊ သကျဆိုငျရာပွညျနယျအဆငျ့ဌာနဆိုငျရာမြားနှငျ့အတူ သွဂုတျ(၂၁)ရကျ နံနကျ(၁၁)နာရီ ကတောငျကွီးမွို့ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရ အဖှဲ့ရုံး ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျCallခနျးမ၌ ရှမျးပွညျနယျရှိ မှေးမွူရေးစကျရုံမြားအပျေါ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမူဝါဒမြား၊ လုပျထုံး လုပျနညျးမြားနှငျ့ အစိုးရ၏ရညျမှနျးခကျြမြား၊ အခှငျ့အလမျးကိစ်စရပျမြားနှငျ့ စပျလဉျြး၍ International Finance Corporation (IFC) မှ Mr. Bas Rozemuller အဖှဲ့နှငျ့တှဆေုံ့ကွောငျးသိရသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ နပွေညျတျော၊ ရနျကုနျမွို့တှငျ ပွုလုပျမညျ့အခမျးအနားကို ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ဝနျကွီးမြား ကိုဖိတျကွားလိုကွောငျး၊ ဖှငျ့ပှဲကိုအောကျတိုဘာလတှငျ စီစဉျထားပါကွောငျးနှငျ့ ယခုလာရောကျတှဆေုံ့ရသညျမှာ မွနျမာပွညျ တှငျဖွဈပျေါနသေော ဝကျပွဿနာမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ လာရောကျတှဆေုံ့ရခွငျးဖွဈကွောငျး၊ တောငျသူလယျသမားနှငျ့ လုပျငနျးရှငျမြားကိုဖိတျကွားပွီး ပွဿနာကိုရငျဆိုငျဖွရှေငျးနိုငျရနျ စီစဉျထားပါကွောငျး၊ ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍတှငျ ထုတျလုပျမှုနှငျ့ အမွတျအစှနျးပိုမိုရရှိအောငျ သနျ့ရှငျးသောပုဂ်ဂလိကမြားကို စနဈတကဆြောငျရှကျပေးခွငျး၊ ဝကျသားမြားထုတျလုပျခွငျးကဏ်ဍ တှငျအစားအစာမြားကို စမျးသပျဆောငျရှကျပေးလကျြရှိကွောငျး၊ ကုမ်ပဏီနှငျ့လယျသမား လကျလှမျးမီအောငျ အတူတူဆောငျရှကျရနျ ရှိပါကွောငျး၊ စုစညျးဆောငျရှကျရနျလညျး ယုံကွညျပါကွောငျးနှငျ့ နိုငျငံတကာစံခြိနျစံညှနျးနှငျ့ ကိုကျညီမှုမရှိမညျကိုတှရေ့ပါ ကွောငျး၊ အစိုးရအဖှဲ့အစညျးနှငျ့ဌာနမြားက အဓိကအခနျးကဏ်ဍတှငျ ပါဝငျနသေညျကိုတှရေ့ပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျ စိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေးထုတျလုပျမှုကဏ်ဍတှငျ ဝကျသားကိုအဓိကထုတျလုပျသညျကိုတှရေ့ပါကွောငျး၊ ရောဂါကူးစကျမှုခံရပါက ဝကျမြားကို သတျပဈရနျလိုပါကွောငျး၊ ရောဂါဖွဈပှားပွီးပါက ဝကျမြားကိုအသဈပွနျလညျမှေးမွူရနျ မဖွဈနိုငျကွောငျး၊ နရော အသဈရှာဖှရေနျလိုအပျကွောငျးနှငျ့ နရောအသဈတှငျ ပွနျလညျမှေးမွူရနျလိုကွောငျး၊ လကျရှိဝကျသားထုတျလုပျမှုကဏ်ဍတှငျ ဘယျလိုကာကှယျရနျလိုကွောငျး၊ စံခြိနျစံညှနျးကောငျးပါကနိုငျငံခွားသို့တငျပို့နိုငျကွောငျးနှငျ့ အစိုးရနှငျ့ပွညျသူ့သဘောထား လိုအပျပါကွောငျး၊ အစိုးရမူဝါဒနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုဌာနမှ ပိတျဆို့မှုမရှိရနျလိုကွောငျး၊ ဝကျမြားမှေးမွူပါက တဈခွံနှငျ့တဈခွံနီးစပျ ရနျမလိုကွောငျး၊ မွနေရောလိုကွောငျးနှငျ့အကှာအဝေးရှိရနျလိုကွောငျး၊ အစိုးရအဖှဲ့အနဖွေငျ့ အကွံပေးဆှေးနှေးစလေိုကွောငျး ပွောကွားသှားသညျ။
ဆကျလကျ၍ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျဒေါကျတာလငျးထှဋျက ယခုလို International Finance Corporation (IFC) မှ Mr. Bas Rozemuller အဖှဲ့မှ ပထမဆုံးအနဖွေငျ့လာရောကျတှဆေုံ့သညျ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါ ကွောငျးနှငျ့ ကွိုဆိုပါကွောငျးပွောကွားပွီး၊ ပွညျနယျဝနျကွီးမြားနှငျ့ မိတျဆကျပေးကာ ယခုလိုဝကျမှေးမွူရေးနှငျ့ ရောဂါ ကရြောကျမှုကို ရှငျးပွပေးသညျ့အတှကျ ဗဟုသုတရရှိကွောငျးနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံတှငျဆောငျရှကျထားရှိမှု တငျပွရခွငျးဖွဈပွီး၊ ရှမျးပွညျနယျတှငျ ဝေးလံသောဒသေမြားလညျးရှိပါကွောငျးနှငျ့ ထိရောကျမှုရှိအောငျ ဆေးဝါးပစ်စညျးမြားနှငျ့ ကုသမှုမြားကို လိုအပျပါကွောငျး ဆှေးနှေးသှားသညျ။
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဂေါက်ကွင်းနှင့် အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား နားလည်မှုစာချွန်လွှာချုပ်ဆို
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ် ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းကော်မတီနှင့် HEHO RESORT (INNKHAUNG) CO.,LTD တို့အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂေါက်ကွင်းနှင့် အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ(MoU)စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းကို သြဂုတ်(၂၇)ရက် နံနက်(၁၁)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါစာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်က ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် HEHO RESORT (INNKHAUNG) CO.,LTD တို့နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) စာချုပ်ချုပ်ဆို ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကလောမြို့နယ်၊ ဟဲဟိုးအင်းခေါင်းဒေသ၊ ဘော်နင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ၆၃ဧက+၂၆၃ဧက စုစုပေါင်း ၃၂၆ဧကနှင့် ကျပ်သန်း၄၀၀၀ရင်းနှီးမြှပ်နှံ၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းများကိုအလျင်အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် ပြောကြားသွား သည်။
ဆက်လက်၍ HEHO RESORT (INNKHAUNG) CO.,LTD ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်အောင်စိုးမှ (MoU) စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ဟဲဟိုးလေဆိပ်ကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအောင် မြှင့်တင်ရန်နှင့် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် နေရာများတွင်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် ယခုလိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်း အလျင်အမြန်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားပြီး စာချုပ်များကို လက်မှတ်ရေးထိုး၍ အပြန်အလှန်လဲလှယ်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
နိုငျငံတကာအဆငျ့မီ ဂေါကျကှငျးနှငျ့ အဆငျ့မွငျ့အိမျရာ စီမံကိနျးလုပျငနျးမြားအား နားလညျမှုစာခြှနျလှာခြုပျဆို
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့၊ ပွညျနယျ ဒသေန်တရဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးစီမံကိနျးကျောမတီနှငျ့ HEHO RESORT (INNKHAUNG) CO.,LTD တို့အကြိုးတူပူးပေါငျးဆောငျရှကျမညျ့ နိုငျငံတကာအဆငျ့မီဂေါကျကှငျးနှငျ့ အဆငျ့မွငျ့အိမျရာ စီမံကိနျးလုပျငနျးမြားအား နားလညျမှုစာခြှနျလှာ(MoU)စာခြုပျခြုပျဆိုခွငျးကို သွဂုတျ(၂၇)ရကျ နံနကျ(၁၁)နာရီက တောငျကွီးမွို့ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရ အဖှဲ့ရုံး အစညျးအဝေးခနျးမ၌ ကငျြးပကွောငျးသိရသညျ။
အဆိုပါစာခြုပျခြုပျဆိုပှဲတှငျ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျစီမံကိနျးနှငျ့ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး ဦးစိုးညှနျ့လှငျက ဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ HEHO RESORT (INNKHAUNG) CO.,LTD တို့နှငျ့ နားလညျမှုစာခြှနျလှာ (MoU) စာခြုပျခြုပျဆို ရခွငျးဖွဈကွောငျးနှငျ့ ကလောမွို့နယျ၊ ဟဲဟိုးအငျးခေါငျးဒသေ၊ ဘျောနငျးကြေးရှာအုပျစုတှငျ ၆၃ဧက+၂၆၃ဧက စုစုပေါငျး ၃၂၆ဧကနှငျ့ ကပျြသနျး၄၀၀၀ရငျးနှီးမွှပျနှံ၍ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့နှငျ့ အကြိုးတူပူးပေါငျးဆောငျရှကျမညျဖွဈသညျ့အတှကျ ဝမျးမွောကျဂုဏျယူမိပါကွောငျးနှငျ့ လုပျငနျးမြားကိုအလငျြအမွနျအကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျပေးသှားရနျ ပွောကွားသှား သညျ။
ဆကျလကျ၍ HEHO RESORT (INNKHAUNG) CO.,LTD ဥက်ကဋ်ဌ ဦးအောငျအောငျစိုးမှ (MoU) စာခြုပျလကျမှတျရေးထိုး ခွငျးနှငျ့ပတျသကျ၍ ရှငျးလငျးတငျပွရာ ဟဲဟိုးလဆေိပျကို နိုငျငံတကာအဆငျ့မီအောငျ မွှငျ့တငျရနျနှငျ့ ၎င်းငျးနှငျ့ဆကျစပျသညျ့ နရောမြားတှငျလညျး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရနျအတှကျ ယခုလိုရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့နှငျ့ အကြိုးတူပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျ ဖွဈကွောငျး၊ လုပျငနျးမြားကိုလညျး အလငျြအမွနျအကောငျအထညျဖျောနိုငျရနျ ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး ပွောကွားသှားပွီး စာခြုပျမြားကို လကျမှတျရေးထိုး၍ အပွနျအလှနျလဲလှယျကွကွောငျး သိရှိရသညျ။
ပြည်နယ်အဆင့် ကျောင်းကျန်းမာရေးသီတင်းပတ်လှုပ်ရှားမှု အထိမ်းအမှတ်ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
ကျိုင်းတုံ ဩဂုတ် - ၂၀
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်မြင့်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်ပညာရေးမှူး ဦးအောင်သင်းတို့အဖွဲ့သည် ၂၀၁၉ ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီက တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ အ.မ.က (ခွဲ) ဟွေဟွယ်ကျောင်းသို့ သွားရောက်ပြီး UWS မှ ကူညီပံ့ပိုးနေမှုများကို သွားရောက်ကြည့်ရှု အားပေးစကားပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)ရှိ ကျောင်းသားလူငယ်တစ်ရပ်လုံးတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော လူနေမှုပုံစံများ သိရှိကျင့်သုံးစွဲမြဲစေရန်၊ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်နှင့် ကျောင်းကျန်းမာ ရေး သီတင်းပတ်လှုပ်ရှားမှုများ၊ ကျောင်းကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြည်သူလူထုနှင့် ကျောင်းသားမိဘများ ပိုမိုသိရှိပြီး ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြည်နယ်အဆင့် ကျောင်းကျန်းမာရေးသီတင်းပတ် လှုပ်ရှားမှု အထိမ်းအမှတ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီက ကျိုင်းတုံမြို့၊ Amazing Hotel အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းက ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းပြီး နှစ်စဉ်ဩဂုတ်လ ဒုတိယပါတ်ကို ကျောင်းကျန်းမာရေးသီတင်းပတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ကျောင်းကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း အတာဖြင့် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း အဖွင့်အမှာစကား၌ ပြောကြားပြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းကျန်းမာရေး စံပြဆုရကျောင်းများနှင့် ဆုဥကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများအား ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က ဆုများအသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ကာ စုပေါင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကြသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ဝဏ္ဏစိုး၊ ပြည်နယ်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရဲနိုင်၊ ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ် အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ စံပြဆုရကျောင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၊ တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရသည်။
ပွညျနယျအဆငျ့ ကြောငျးကနျြးမာရေးသီတငျးပတျလှုပျရှားမှု အထိမျးအမှတျဖှငျ့ပှဲ ကငျြးပ
ကြိုငျးတုံ ဩဂုတျ - ၂၀
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျလူမှုရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာမြိုးထှနျး၊ ပွညျနယျပညာရေးမှူး ဦးအောငျကြျောမွငျ့၊ တာခြီလိတျမွို့နယျပညာရေးမှူး ဦးအောငျသငျးတို့အဖှဲ့သညျ ၂၀၁၉ ဩဂုတျလ ၁၉ ရကျ မှနျးလှဲ ၃ နာရီက တာခြီလိတျမွို့နယျ၊ အ.မ.က (ခှဲ) ဟှဟှေယျကြောငျးသို့ သှားရောကျပွီး UWS မှ ကူညီပံ့ပိုးနမှေုမြားကို သှားရောကျကွညျ့ရှု အားပေးစကားပွောကွားခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ ရှမျးပွညျနယျ(အရှပေို့ငျး)ရှိ ကြောငျးသားလူငယျတဈရပျလုံးတှငျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ညီညှတျသော လူနမှေုပုံစံမြား သိရှိကငျြ့သုံးစှဲမွဲစရေနျ၊ ကနျြးမာရေးအဆငျ့အတနျး တိုးတကျမွငျ့မားလာစရေနျနှငျ့ ကြောငျးကနျြးမာ ရေး သီတငျးပတျလှုပျရှားမှုမြား၊ ကြောငျးကနျြးမာရေးလုပျငနျးစဉျမြားကို ပွညျသူလူထုနှငျ့ ကြောငျးသားမိဘမြား ပိုမိုသိရှိပွီး ပိုမိုပူးပေါငျးဆောငျရှကျလာနိုငျစရေနျ ရညျရှယျ၍ ပွညျနယျအဆငျ့ ကြောငျးကနျြးမာရေးသီတငျးပတျ လှုပျရှားမှု အထိမျးအမှတျဖှငျ့ပှဲ အခမျးအနားကို ဩဂုတျလ ၂၀ ရကျနေ့ နံနကျ ၉ နာရီက ကြိုငျးတုံမွို့၊ Amazing Hotel အစညျးအဝေးခနျးမ၌ ကငျြးပကွောငျးသိရသညျ။
ဆကျလကျ၍ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့၊ ပွညျနယျလူမှုရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာမြိုးထှနျးက ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနအနဖွေငျ့ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနနှငျ့ ပူးပေါငျးညှိနှိုငျးပွီး နှဈစဉျဩဂုတျလ ဒုတိယပါတျကို ကြောငျးကနျြးမာရေးသီတငျးပတျအဖွဈ သတျမှတျပွီး ကြောငျးကနျြးမာရေးလုပျငနျးစဉျမြားကို တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျး အတာဖွငျ့ ဆောငျရှကျလြှကျရှိပါကွောငျး အဖှငျ့အမှာစကား၌ ပွောကွားပွီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသငျနှဈ ကြောငျးကနျြးမာရေး စံပွဆုရကြောငျးမြားနှငျ့ ဆုဥကြောငျးသား/ ကြောငျးသူမြားအား ပွညျနယျလူမှုရေးဝနျကွီးနှငျ့ တာဝနျရှိသူတို့က ဆုမြားအသီးသီးပေးအပျခြီးမွှငျ့ကာ စုပေါငျးမှတျတမျးဓာတျပုံမြား ရိုကျကူးကွသညျ။
အဆိုပါအခမျးအနားသို့ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျလူမှုရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာမြိုးထှနျး၊ ပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒေါကျတာ ဝဏ်ဏစိုး၊ ပွညျနယျဒုတိယအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးရဲနိုငျ၊ ပွညျနယျ/ ခရိုငျ/ မွို့နယျ အဆငျ့ဌာနဆိုငျရာတာဝနျရှိသူမြား၊ စံပွဆုရကြောငျးမြားမှ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ ကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြား၊ တိုငျးရငျးသားယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြား တကျရောကျကွကွောငျး သိရသညျ။
တောင်ကြီး သြဂုတ် − ၁၉
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားအာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သုတေသနဌာနခွဲမှ ဦးဆောင်၍ ဆက်စပ် ဝန်ကြီးဌာနများ ပါဝင်ရေးဆွဲထားသော MS-NPAN ၏ဦးစားပေး ရွေးချယ်ထားသည့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်(၇)ခုတို့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်ပါဝင်နေပြီး၊ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကနဦးဆွေးနွေးပွဲများ ဆောင်ရွက် ကာ ယခုသြဂုတ်(၁၉)ရက် နံနက်(၉)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ အာဟာရကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သဘောတူညီမှုစာချုပ်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အဆင့်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ရေရှည်အာဟာရချို့တဲ့မှုကြောင့် ငါးနှစ်အောက်ကလေး များအရပ်ပုမှုသည် ၃၆.၅% ရှိနေပြီး တတိယအများဆုံးဖြစ်နေကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် အာဟာရချို့တဲ့မှု လျော့ကျရေးကို ဝန်ကြီးဌာနများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုနေပြီး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှလည်း အခြားသော ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ ကဏ္ဍပေါင်းစုံပူးပေါင်းပါဝင်သော အမျိုးသား အာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် များအတွင်း အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှု လျော့နည်းပပျောက်ရေးကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်သည် မြေဧရိယာအလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီး မြို့နယ်များအလိုက် မတူကွဲပြားခြားနားသော အခြေအနေများ အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်သည့်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အာဟာရချို့တဲ့မှုကို ဖြစ်စေသော နောက်ခံအကြောင်းအရင်းများ၊ တိုက်ရိုက်အကြောင်းအရင်းများကို ဦးတည်ဖြေရှင်းသော လုပ်ငန်းများဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ မြို့နယ်အသီးသီးတွင် ရှိနေသော အရင်းအမြစ်များကို အထိအရောက်ဆုံး အသုံးပြုရန်နှင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု အများဆုံးဖြစ်စေသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန် အရေးကြီးကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန စီမံကိန်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဆွေလင်းမှ အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း၏ Deputy head of cooperation ဖြစ်သူ Mr.Pedro မှအမှာစကားပြောကြားကြသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန စီမံကိန်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဥရောပ သမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း(EU) မှ Head of cooperation, Mr. Pedro, Mr. Alvaro Ortega Aparicio ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရှိရ သည်။
အာဟာရကဏ်ဍ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေး သဘောတူညီမှုစာခြုပျဆိုငျရာ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေး
တောငျကွီး သွဂုတျ − ၁၉
ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန အမြိုးသားအာဟာရဖှံ့ဖွိုးရေးနှငျ့ သုတသေနဌာနခှဲမှ ဦးဆောငျ၍ ဆကျစပျ ဝနျကွီးဌာနမြား ပါဝငျရေးဆှဲထားသော MS-NPAN ၏ဦးစားပေး ရှေးခယျြထားသညျ့ တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျ(၇)ခုတို့တှငျ ရှမျးပွညျနယျပါဝငျနပွေီး၊ ဆောငျရှကျရမညျ့ လုပျငနျးစဉျမြားကို ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးတှငျ ကနဦးဆှေးနှေးပှဲမြား ဆောငျရှကျ ကာ ယခုသွဂုတျ(၁၉)ရကျ နံနကျ(၉)နာရီက တောငျကွီးမွို့ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ရုံး အစညျးအဝေးခနျးမ၌ အာဟာရကဏ်ဍ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေး သဘောတူညီမှုစာခြုပျဆိုငျရာ ပွညျနယျအဆငျ့ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးပှဲ ကငျြးပကွောငျးသိရသညျ။
ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျဒေါကျတာလငျးထှဋျက ရှမျးပွညျနယျတှငျ ရရှေညျအာဟာရခြို့တဲ့မှုကွောငျ့ ငါးနှဈအောကျကလေး မြားအရပျပုမှုသညျ ၃၆.၅% ရှိနပွေီး တတိယအမြားဆုံးဖွဈနကွေောငျး၊ ရှမျးပွညျနယျတှငျ အာဟာရခြို့တဲ့မှု လြော့ကရြေးကို ဝနျကွီးဌာနမြား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရနျလိုနပွေီး၊ စိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေး၊ ဆညျမွောငျးဝနျကွီးဌာနမှလညျး အခွားသော ဝနျကွီးဌာနမြားနှငျ့ ခြိတျဆကျပွီး အထူးအလေးထား ဆောငျရှကျနပေါကွောငျး၊ ကဏ်ဍပေါငျးစုံပူးပေါငျးပါဝငျသော အမြိုးသား အာဟာရဖှံ့ဖွိုးမှုဆိုငျရာ လုပျငနျးအစီအစဉျကို စိုကျပြိုးရေးဖှံ့ဖွိုးမှု မဟာဗြူဟာနှငျ့ ခြိတျဆကျကာ တိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ပွညျနယျ မြားအတှငျး အာဟာရဓာတျခြို့တဲ့မှု လြော့နညျးပပြောကျရေးကို အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျရမှာ ဖွဈကွောငျး၊ ရှမျးပွညျနယျသညျ မွဧေရိယာအလှနျကယျြပွနျ့ပွီး မွို့နယျမြားအလိုကျ မတူကှဲပွားခွားနားသော အခွအေနမြေား အမြိုးမြိုး ရှိနိုငျသညျ့အတှကျ စီမံကိနျးလုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျရာတှငျ အာဟာရခြို့တဲ့မှုကို ဖွဈစသေော နောကျခံအကွောငျးအရငျးမြား၊ တိုကျရိုကျအကွောငျးအရငျးမြားကို ဦးတညျဖွရှေငျးသော လုပျငနျးမြားဖွဈရနျလိုအပျပွီး၊ မွို့နယျအသီးသီးတှငျ ရှိနသေော အရငျးအမွဈမြားကို အထိအရောကျဆုံး အသုံးပွုရနျနှငျ့ အကြိုးဖွဈထှနျးမှု အမြားဆုံးဖွဈစသေော လုပျငနျးမြားကို ဦးစားပေး ဆောငျရှကျရနျ အရေးကွီးကွောငျး ပွောကွားသှားသညျ။
ဆကျလကျ၍ စိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေးနှငျ့ ဆညျမွောငျးဝနျကွီးဌာန စီမံကိနျးဦးစီးဌာန ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဦးကြျောဆှလေငျးမှ အမှာစကားပွောကွားပွီး၊ ဥရောပသမဂ်ဂအဖှဲ့အစညျး၏ Deputy head of cooperation ဖွဈသူ Mr.Pedro မှအမှာစကားပွောကွားကွသညျ။ အဆိုပါအခမျးအနားသို့ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ၊ ပွညျနယျဝနျကွီးမြား၊ စိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေးနှငျ့ ဆညျမွောငျးဝနျကွီးဌာန စီမံကိနျးဦးစီးဌာန ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ၊ ဥရောပ သမဂ်ဂအဖှဲ့အစညျး(EU) မှ Head of cooperation, Mr. Pedro, Mr. Alvaro Ortega Aparicio ကြှမျးကငျြပညာရှငျမြား တကျရောကျကွကွောငျး သိရှိရ သညျ။
ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုလေ့ကျင့်ခန်း(အေရိုးဗစ်) ၉ဦးတွဲလေ့ကျင့်စဉ်အသစ် ဆင့်ပွားသင်တန်း(၁/၂၀၁၉) သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ
တောင်ကြီး သြဂုတ် − ၂၂
ရှမ်းပြည်နယ် အမျိုးသမီးအားကစားအဖွဲ့ဆပ်ကော်မတီနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုလေ့ကျင့်ခန်း (အေရိုးဗစ်) ၉ဦးတွဲ လေ့ကျင့်စဉ်အသစ် ဆင့်ပွားသင်တန်း(၁/၂၀၁၉) သင်တန်းဆင်းပွဲကို သြဂုတ်(၂၂)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ပြည်နယ်လေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံ၌ ကျင်းပသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ဇနီး ရှမ်းပြည်နယ် အမျိုးသမီးအားကစားအဖွဲ့ဆပ်ကော်မတီနာယက ဒေါ်နန်းရွှေမြင့်က ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်(၂၉)မြို့နယ် အခြေခံပညာကျောင်းများမှ ဆရာမ(၁၁၇)ဦး၊ ကျောင်းသူ(၆၅) ဦး၊ ပြင်ပမှ(၁၁)ဦးအပါအဝင် စုစုပေါင်းသင်တန်းသား(၂၁၄)ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်ကို သိရှိရပါကြောင်း၊ ယခုသင်တန်းနည်းတူ လားရှိုးမြို့တွင် ၂၀၁၉ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၅)ရက်မှ(၉)ရက်နေ့အထိ သင်တန်းသူ(၃၀၀)ဦးနှင့် ဆင့်ပွားသင်တန်းကို အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ သင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုလေ့ကျင့်ခန်း (အေရိုးဗစ်) ၉ဦးတွဲ ပြိုင်ပွဲကို လေ့ကျင့်စဉ်အသစ် ပြန်လည်မွမ်းမံလိုက်ပြီး၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပမည့်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် အေရိုးဗစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ၉ဦးတွဲလေ့ကျင့်စဉ်အသစ်သာ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင်လည်း အသစ် ပြန်လည်မွမ်းမံလိုက်သည့် လေ့ကျင့်စဉ်အသစ်များကို သိရှိလေ့ကျင့်နိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်ပြီး ဆင့်ပွားသင်တန်းပေးရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ သင်တန်းသူများကဖွင့်လှစ်သည့် ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုလေ့ကျင့်ခန်း (အေရိုးဗစ်) ၉ဦးတွဲ လေ့ကျင့်စဉ် အသစ်နှင့်သရုပ်ပြသပြီး၊ အကြီးတန်းသင်တန်းသားစံပြဆု ရရှိသူများအား ဆုတံဆိပ်နှင့်ငွေသားချီးမြှင့်ရာ သင်တန်းသားစံပြဆု တတိယဆုရရှိသော ကလောမြို့နယ်မှ မောင်တင်ထွန်းဝင်း၊ ဒုတိယဆုရရှိသော နောင်ချိုမြို့နယ်မှ ဝင့်သူဇာထွန်း၊ ပထမဆုရရှိ သောပင်းတယမြို့နယ်မှ အေးမွန်မွန်သိမ့်တို့ကို ရှမ်းပြည်နယ် အမျိုးသမီးအားကစားအဖွဲ့ဆပ်ကော်မတီနာယက ဒေါ်နန်းရွှေမြင့် မှဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ အငယ်တန်းသင်တန်းသားစံပြဆု ရရှိသည့် တတိယဆုရရှိသော တောင်ကြီးမြို့ အလက(၁၄) ကျောင်းမှ မကြည်စင်သန့်၊ ဒုတိယဆုရရှိသော အထက(၁)ကျောင်းမှ မရှင်ဖုန်းမြတ်၊ ပထမဆုရရှိသော အထက(၅)ကျောင်းမှ မသင်းစုစုစံတို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသမီးအားကစားဆပ်ကော်မတီနာယက ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါ်နန်းဝိုဟိန်းမှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ ဂုဏ်ပြုဆုရရှိသူများကို ရှမ်းပြည်နယ် အမျိုးသမီးအားကစားဆပ်ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ညိုညိုလွင်နှင့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များကို ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းချိုချိုပြုံးတို့မှ အသီးသီးဆုများ ချီးမြှင့်ပေးကြကြောင်း သိရှိရ သည်။
ကိုယျကာယကွံ့ခိုငျမှုလကေ့ငျြ့ခနျး(အရေိုးဗဈ) ၉ဦးတှဲလကေ့ငျြ့စဉျအသဈ ဆငျ့ပှားသငျတနျး(၁/၂၀၁၉) သငျတနျးဆငျးပှဲကငျြးပ
တောငျကွီး သွဂုတျ − ၂၂
ရှမျးပွညျနယျ အမြိုးသမီးအားကစားအဖှဲ့ဆပျကျောမတီနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျ အားကစားနှငျ့ကာယပညာဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါငျးဖှငျ့လှဈသညျ့ ကိုယျကာယကွံ့ခိုငျမှုလကေ့ငျြ့ခနျး (အရေိုးဗဈ) ၉ဦးတှဲ လကေ့ငျြ့စဉျအသဈ ဆငျ့ပှားသငျတနျး(၁/၂၀၁၉) သငျတနျးဆငျးပှဲကို သွဂုတျ(၂၂)ရကျ နံနကျ(၁၀)နာရီက တောငျကွီးမွို့ ပွညျနယျလကေ့ငျြ့ရေးအားကစားရုံ၌ ကငျြးပသညျ။
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ၏ဇနီး ရှမျးပွညျနယျ အမြိုးသမီးအားကစားအဖှဲ့ဆပျကျောမတီနာယက ဒျေါနနျးရှမွေငျ့က ရှမျးပွညျနယျအတှငျးရှိ မွို့နယျ(၂၉)မွို့နယျ အခွခေံပညာကြောငျးမြားမှ ဆရာမ(၁၁၇)ဦး၊ ကြောငျးသူ(၆၅) ဦး၊ ပွငျပမှ(၁၁)ဦးအပါအဝငျ စုစုပေါငျးသငျတနျးသား(၂၁၄)ဦး တကျရောကျခဲ့သညျကို သိရှိရပါကွောငျး၊ ယခုသငျတနျးနညျးတူ လားရှိုးမွို့တှငျ ၂၀၁၉ခုနှဈ သွဂုတျလ(၅)ရကျမှ(၉)ရကျနအေ့ထိ သငျတနျးသူ(၃၀၀)ဦးနှငျ့ ဆငျ့ပှားသငျတနျးကို အောငျမွငျစှာ ဖှငျ့လှဈပေးနိုငျခဲ့ကွောငျး၊ သငျတနျးကိုဖှငျ့လှဈရသညျ့ ရညျရှယျခကျြမှာ ကိုယျကာယကွံ့ခိုငျမှုလကေ့ငျြ့ခနျး (အရေိုးဗဈ) ၉ဦးတှဲ ပွိုငျပှဲကို လကေ့ငျြ့စဉျအသဈ ပွနျလညျမှမျးမံလိုကျပွီး၊ ၂၀၁၉ခုနှဈ နပွေညျတျောတှငျ ကငျြးပမညျ့တိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ပွညျနယျ အရေိုးဗဈပွိုငျပှဲတှငျ ၉ဦးတှဲလကေ့ငျြ့စဉျအသဈသာ ယှဉျပွိုငျရမှာဖွဈ၍ ရှမျးပွညျနယျအတှငျးရှိ မွို့နယျမြားတှငျလညျး အသဈ ပွနျလညျမှမျးမံလိုကျသညျ့ လကေ့ငျြ့စဉျအသဈမြားကို သိရှိလကေ့ငျြ့နိုငျရနျအတှကျ ပွနျလညျပွီး ဆငျ့ပှားသငျတနျးပေးရခွငျး ဖွဈကွောငျးပွောကွားသှားသညျ။
ဆကျလကျ၍ သငျတနျးသူမြားကဖှငျ့လှဈသညျ့ ကိုယျကာယကွံ့ခိုငျမှုလကေ့ငျြ့ခနျး (အရေိုးဗဈ) ၉ဦးတှဲ လကေ့ငျြ့စဉျ အသဈနှငျ့သရုပျပွသပွီး၊ အကွီးတနျးသငျတနျးသားစံပွဆု ရရှိသူမြားအား ဆုတံဆိပျနှငျ့ငှသေားခြီးမွှငျ့ရာ သငျတနျးသားစံပွဆု တတိယဆုရရှိသော ကလောမွို့နယျမှ မောငျတငျထှနျးဝငျး၊ ဒုတိယဆုရရှိသော နောငျခြိုမွို့နယျမှ ဝငျ့သူဇာထှနျး၊ ပထမဆုရရှိ သောပငျးတယမွို့နယျမှ အေးမှနျမှနျသိမျ့တို့ကို ရှမျးပွညျနယျ အမြိုးသမီးအားကစားအဖှဲ့ဆပျကျောမတီနာယက ဒျေါနနျးရှမွေငျ့ မှဆုခြီးမွှငျ့ပေး၍လညျးကောငျး၊ အငယျတနျးသငျတနျးသားစံပွဆု ရရှိသညျ့ တတိယဆုရရှိသော တောငျကွီးမွို့ အလက(၁၄) ကြောငျးမှ မကွညျစငျသနျ့၊ ဒုတိယဆုရရှိသော အထက(၁)ကြောငျးမှ မရှငျဖုနျးမွတျ၊ ပထမဆုရရှိသော အထက(၅)ကြောငျးမှ မသငျးစုစုစံတို့ကို ရှမျးပွညျနယျအမြိုးသမီးအားကစားဆပျကျောမတီနာယက ပွညျနယျစာရငျးစဈခြုပျ ဒျေါနနျးဝိုဟိနျးမှ ဆုခြီးမွှငျ့ပေး၍လညျးကောငျး၊ ဂုဏျပွုဆုရရှိသူမြားကို ရှမျးပွညျနယျ အမြိုးသမီးအားကစားဆပျကျောမတီ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဒျေါညိုညိုလှငျနှငျ့ သငျတနျးဆငျးလကျမှတျမြားကို ဥက်ကဋ်ဌဒျေါနနျးခြိုခြိုပွုံးတို့မှ အသီးသီးဆုမြား ခြီးမွှငျ့ပေးကွကွောငျး သိရှိရ သညျ။
တောင်ကြီးမြို့တွင် Access to Health Fund, State Health Grant ၏ State Level Advocacy Meeting အစည်းအ‌ဝေးကျင်းပ
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် UNI Energy Co.,Ltd တို့ သဘောတူညီမှုစာချုပ်ချုပ်ဆို
ကိုးနဝင်းတောင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအနီး သဘာဝငှက်ဘေးမဲ့တောအတွင်း စိုက်ပျိုးထားသောသစ်ပင်များ ရှင်သန်နေမှုကို ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု
အပငျမြိုးသဈကာကှယျခှငျ့ အခှငျ့အရေးလြှောကျထားခွငျးနှငျ့ အသိအမှတျပွုလကျမှတျထုတျပေးခွငျးဆိုငျရာ အမိနျ့ကွျောငွာစာ
အပငျမြိုးသဈကာကှယျခှငျ့ အခှငျ့အရေးရရှိရနျလြှောကျထားသူကပေးဆောငျရမညျ့ အခကွေးငှဆေိုငျရာ အမိနျ့ကွျောငွာစာ